Iindlela zokuSasaza ngoku kunye neziBalo | Martech Zone
Iindlela zokuSasaza ngoku kunye neziBalo
NgoLwesibini, Agasti 1, 2017 Douglas Karr
Enye yeeprojekthi zethu kulo nyaka kukwakha a Ukusasaza ngqo idesika yethu istudiyo sepodcast. Ngokwenyani singasebenzisa izixhobo ezifanayo zokumamela ngelixa songeza ividiyo. Izixhobo zevidiyo zisehla ngexabiso kwaye uninzi lweephakeji ziqala ukuvela ziinkampani zevidiyo ezibukhoma zokulawula isitudiyo esincinci. Sinethemba lokufumana ubuncinci iikhamera ezi-3 kunye nenkqubo yokulawula isezantsi kwisithathu kunye nokudityaniswa kwevidiyo kwiidesktops okanye kwisoftware yenkomfa.
Ukwamkelwa kwangoko komntwana kumngcipheko weendleko eziphezulu kunye nezixhobo eziphelelwe lixesha ngokukhawuleza, kodwa inzuzo yokwamkelwa kwesabelo sentengiso. Ndiyathemba ukuba asilindi ixesha elide, kodwa lide ngokwaneleyo ukuba lisebenzise itekhnoloji emangalisayo ephuhliswayo. Ukuba ufuna ukulandela umntu kwi-Intanethi oyingcali yetekhnoloji yokusasaza bukhoma, qiniseka ukuba uyalandela UJoel Comm. Wabelana ngazo zonke izinto zamva nje kunye ezinkulu kumaqonga nakwizixhobo.
Ke ngoku sikuphi ngokusasaza ngqo namhlanje? Iyaqhuma ekukhuleni kwaye inokuthi iqhubeke kwindlela yolwamkelo kunokuba abaninzi bebecinga. Zintlanu izinto eziphambili kubadlali abasasaza ebaleni ngokukhula kwale infographic, nganye inezibonelelo ezahlukeneyo:
Facebook Live - Ngaphezulu kwezigidi ezingama-360 zabasebenzisi ababukeleyo Facebook Live rhoqo… kodwa gcinani engqondweni ukuba iFacebook inyanzelisa ividiyo ebukhoma, ivelise itoni yeembono kodwa ndibuza eminye yezibalo. Iividiyo ezibukhoma zibukelwe kathathu ubude kunenye imixholo yevidiyo kwaye zihlala zivumela iimpendulo kunye nengxoxo ngexesha lokwenyani kunye nokukwazi ukuyiphinda ividiyo kamva. I-Facebook ikwaceba nabasebenzisi kuyo Imephu ebukhoma yeFacebook ke unokufumana imifudlana ephilayo kunye neyasekhaya. I-Facebook Live ngoku inokwenzeka ngeselula, idesktop, kunye namaphepha.
Amabali aBukhoma ka-Instagram - Malunga nezigidi ezingama-200 zabasebenzisi abaqhelekileyo ababukeleyo Instagram phila. Ababukeli banokuzibandakanya ngokuthandwa kwexesha kunye nezimvo. Abenzi benkcazo bangakhetha ukuphawula izimvo kubo bonke ababukeli ukuba babone. Amabali aBukhoma ayafumaneka ngenxalenye ephezulu yesicelo kwaye amabali amatsha anokufunyanwa kwi Phezulu ngokuPhila icandelo kwithebhu yokuhlola. I-Instagram yathatha i-chunk enkulu kwi-Snapchat, yacotha ukukhula kwabo ngama-82% emva kokulinganisa iimpawu zokusasaza ngqo zikaSnapchat.
I-YouTube ngoku - Ngelixa ngaphezulu kwebhiliyoni yabantu basebenzisa i-YouTube, andikholelwa I-Youtube Live ibonwa njenge zentlalo indawo yokusasaza ngqo kweli nqanaba. Ukusasaza bukhoma kungoku nje kwezitishi eziqinisekisiweyo kwaye umjelo wokukhetha oshukumayo okhoyo uyafumaneka kuphela xa unababhalisile abayi-1,000 XNUMX. Amagqabantshintshi okwenyani ayafumaneka kwaye iSuper Chat inika ababukeli indlela yokuqaqambisa amagqabantshintshi abo ngexesha losasazo lwabo. Iziganeko eziBukhoma ze-YouTube ixhasa iikhamera ezininzi kwaye inokucwangciswa ukuba ithengise.
ukudideka - ukudideka ilawula intengiso yemidlalo apho isigidi se-9.7 sabasebenzisi bemihla ngemihla bachitha imizuzu eyi-106 bebukele imifudlana ephilayo suku ngalunye ngokomndilili. Amagqabantshintshi exesha langempela kunye nee-emoticons ezikhoyo kwifestile yencoko. Abasebenzisi beTwitch banokuwela-bakhuthaze eminye imilambo xa ijelo lakho lingaxhunyiwe kwi-intanethi lisebenzisa iMo yeNdawo yokubamba. Iimpawu ze-Emoticons ziyakwazi ukuthengwa ukuze abalandeli banokunika iminikelo eyongezelelweyo kubasasazi.
uyaphila -Izigidi ezi-6 zabasebenzisi bebonke abajonga umxholo rhoqo ngenyanga uyaphila., usetyenziso oluselfowuni oluvela kumculo.ly. Abasebenzisi abaqhelekileyo basebenzisa iiseshoni ezintathu ngosuku kwi-app, okanye malunga nemizuzu eyi-3.5 ngosuku. Iimpawu zibandakanya amagqabantshintshi okwenyani kunye "nothando lwe-emoji". Ukhetho lokundwendwela luvumela ukusasaza ngqo ukuba kubandakanye abalandeli njengeendwendwe kusasazo. Izipho ezithengwe ngabalandeli kunye nee icon zinokuncamathisela kumagqabantshintshi kwaye zihlale ixesha elide kwiscreen.
Jonga yonke infographic evela Koeppel ngqo, Ukuphakama koSasazo oluBukhoma: Ukuphinda uchaze ixesha lokuzibandakanya okwenyani.
tags: facebook bukhomainstagram bukhomahlaliswaUkuzibandakanya bukhomaamanani okusasaza aphilayouyaphilaedlamkileyozomculoukudidekayoutube live
Amanyathelo ali-10 okwakha iNkqubo yoLuntu yokuNika abaSebenzi abaSebenzayo